प्रिज्मा प्रिन्सी कसको प्रेममा
पछिल्लो केहि समय यता नेपालका चर्चित हास्यकलाकार सागर लम्साल क्षेत्री ‘बले’ प्रेममा रहेको खबर एकाएक बाहिरिएको छ ।
बुझिएअनुसार लम्साल टिकटकमा राम्रो फलोअर्स कमाएकी प्रिज्मा खतिवडासंग प्रेममा रहेका जनाइएकोछ। त्यस्तै प्रिज्माकी बहिनि प्रिन्सी खतिवडा पनि टिकटकबाट उदाएर म्युजिक भिडियोमा सफलता हासिल गर्दै आएका मन्जिल बस्नेतको प्रेममा रहेकी जनाइएकोछ ।
प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा जुम्ल्याहा दिदिबहिनी हुन्। यी चारै जनाले ‘रनभुल’नामक एक म्युजिक भिडियोमा एकसाथ अभिनय पनि गरिसकेका छन् ।
प्रिज्माले सागर लम्साल ‘बले’ फिचर्ड हरेक गीतको टिकटक भिडियो बनाउँदै आएकी थिइन् । भने प्रिन्सीले माघ २० गते मन्जिल बस्नेतसंगको एक तस्विर शेयर गर्दै कोहि मान्छे आफ्नो मुटुको नजिक रहेको भन्दै क्याप्शन लेखेकी थिइन्।
यतिबेला सागर लम्साल सहित चारैजनालाई सामाजिक संजालमा बधाईको ओइरो लागेको छ ।
एक विश्वस्त श्रोतका अनुसार सागर ‘बले’ र प्रिज्माले केहि बर्षमा बिहे गर्दैछन । बुझिएअनुसार केहि समयदेखी प्रेममा रहेका उनिहरुको घरपरिवारमा समेत कुराकानी भईसकेको छ ।
सागर लम्साल हाल ‘सक्किगो नी’ नामक हाँस्य टेलिश्रृंखलामा अभिनय गरिरहेका छन् ,उनले दर्जनौँ सफल म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् ।
२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार ०७:१६ गते0Minutes 99 Views
१.	धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र डहरे देउरालीको महत्व
२.	मेलम्ची बाढीपीडितका लागि खटेका थिए धर्म, ११ हजार भोल्टको करेन्ट लागेर गुमाए ज्यान
३.	‘मेरो आँटको परीक्षण नगरे हुन्छ, सभापतिमा लड्ने तय गरिसकें’
४.	गुगल प्ले स्टोरमा जोकर भाइरसको आक्रमण, डिलिट गरिहाल्नुस् यी ८ एप